I-infographic: Indawo yokuSebenza ngeFowuni
Isitayile sokuSebenza esiSelfowuni
NgoLwesihlanu, Agasti 12, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 UAdam Omncinci
UMphathi woNxibelelwano loLuntu Gist (kutshanje kufunyenwe yiRIM) beka le infographic kwiNdawo yokuSebenza yeFowuni. Ngokungafaniyo ne- UDell Infographic kubasebenzi beselfowuni le infographic ijolise ngakumbi kwimikhwa kunye nokukhethwa ngumsebenzi oshukumayo ngokuchaseneyo nokuba kutheni inkampani kufuneka ithathele ingqalelo ukuhlanganisa abasebenzi. Njenge:
Iipesenti ezingama-65 zabasebenzi abahambahambayo sebenzisa ithebhulethi
I-32% yabasebenzi kwihlabathi liphela ngoku ixhomekeke ngaphezu kwesinye isixhobo esiphathwayo ngexesha lomsebenzi oqhelekileyo.
Abasebenzisi abafikelela I-imeyile yeselfowuni inyuke ngama-36%
Jonga ngakumbi ..
Itekhnoloji yefowuni iyatshintsha indawo yokusebenza. Itshintshe njani eyakho?
Sukutyhafa ngamajelo eendaba